Manomboka amin’ny antoko ny fanovana… | NewsMada
Manomboka amin’ny antoko ny fanovana…
Par Taratra sur 11/03/2019
Ahoana ihany izy ity e? Tsy inona fa ny amin’ny fanaterana ny antontan-taratasy firotsahan-kofidina amin’izao fifidianana solombavambahoaka izao. Tsiririn-jinga ny raharaha, zara fa misy. Miandry ny fotoana farany? Eo ko ny paipaika sy ny kajikajy politika. Amin’izany rehetra izany, ny fifandaminana eny anivon’ny antoko poltika no hoe tena sarotra sy mafy amin’izao. Nahoana?
Mbola tsy mahafa-bela ny tarazo amin’ny fomba fanaovana politika: manaraka olona fa tsy foto-kevitra, hany ka saika olon-tokana no tompon’ny fanapahan-kevitra farany amin’ny zava-drehetra. Tsy mahagaga, ohatra, talohaloha teo raha tonga eo amin’ny fitondrana ny sasany vao manangana antoko. Tsy izay matanjaka no mahazo fitondrana, fa izay mahazo fitondrana no matanjaka.
Rehefa tsy eo amin’ny fitondrana intsony ny antoko, manjavozavo miaraka amin’izay ny fiainana politika, mifanaritaka an-toerana ireo samy mpikambana, samy manao izay hivoahany… Sakaizan’ny mpandresy? Tsy misy na tsy hita be ihany izay fitsinjaram-pahefana sy andraikitra, fifampitokisana… Toy izany koa ny hoe teny midina, ifampierana; teny miakatra ifampifehezana.
Tsy mahagaga raha misaritaka an-toerana rehefa tonga tokoa ny tokoa toy ny amin’izao fifidianana solombavambahoaka izao: iza no atolotra ho kandidà? Mety tsy hitovy ny tena zava-misy any ifotony sy ny tatitra voarain’ny foibe na ny resaka ambony taratasy sy latabatra. Izay no anisan’ny mampirongatra ny firotsahan-kofidina amin’ny anaran’ny tsy miankina, fa samy te lohany.
Tsy mahagaga ihany koa raha zary mandeha ho azy ny fivadibadihana etsy sy eroa. Efa miseholany mandrakariva eo anivon’ny antoko politika tsinona ny tsy fifampitokisana, fisaritahana, fifampiandrasana kendry tohina… Tombontsoa manokana no mahamaika sy zava-dehibe amin’ny sasany? Izay no anisan’ny fototra mahatonga ny antoko politika hizarazara roa, telo, efatra…
Mba hisy amin’izay ve ny fiovana sy ny fanovana amin’ny fomba fanaovana politika; eny, na eo anivon’ny antoko politika ihany aza aloha. Manomboka amin’ny tena ny fanovana raha te hanova ny hafa?